राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम - Ratopress::रातो प्रेस
केशव बेल्बासे/ कपिलवस्तु ।
२३औ राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवश २०७७ को अवसरमा शिवराज नगरपालिकाको सहकार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५ विन्ध्यवमसीनि बाहिनि मुख्यालय चन्द्रौटाद्वारा बृहत जनचेतना मुलक प्रदशन कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ ।
प्रदर्शन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न खलका आकस्मिक घटना तथा विपतको बेला के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा नाटक प्रस्तुत गरेका थिए । दिनानुदिन रुपमा बढदै गईरहेको सवारी दुर्घटना तथा विपत नियन्त्रण तथा यसबाट बच्ने उपाय बारे आम जनतामा जनचेतना जगाउने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५ विन्ध्यवासीनि बाहिनि मुख्यालय चन्द्रौटाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) किशोर प्रधानले बताउनुभयो । सशस्त्र प्रहरीले जस्तो सुकै विपतको पनि सामना गर्दै जनताको सेवामा समर्पीत रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी लुम्बिनि प्रदेश प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन कुमार के सिले यस्ता प्रदशन मुलक रहेको बताउनुभयो । विपदसगँ जुद्ने सामान्य ज्ञान तथा सजिलो तरीका थाहा नहुदा सामान्य खालको घटनामा पनि प्रहरीलाई गुहार्नुपर्ने भएको ज्ञानको कमिले सामान्य घटनाले पनि ठुलो विपत निम्त्याउने हुदा यस्ता घरायसी घटनाबाट जोगीने विषयमा घरका दिदिबहिनी हरुलाई सिकाउनुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता समान्य खालको समस्या तथा घटनाहरुसगँ जुद्ने खालको शिक्षा विद्यालय स्तरमा पढाउनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य के सिले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिका नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले विपत भइपरि आउने भएकोले यसबाट बच्ने उपायको बारेमा पहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । समान्य घटनाबाट बच्नकोलागी सामान्य ज्ञान सबैमा आवश्यक हुने बताउनुभयो । हाम्रो सुरक्षाको लागी बनाइएको ट्राफिक नियम हामीले पालना गर्नुपर्ने नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।